Accueil > Gazetin'ny nosy > Fisondrota-karama 30 000ar : Voafitaka ny sehatra tsy miankina
Ao anatin’ny valo (8) volana ihany no voalazan’i ramatoa Hanitra Fitiavana Razakaboana tale jeneralin’ ny asan-panjakana sy ny asa ary ny fananan’asa ny vola ampahany 30 000ar amin’ny 50 000ariary izay nolazain’ny filoham-pirenena mamimbahoaka hampiakarana ny karaman’ny mpiasa hoan’ny sehatra tsy miankina.
Voalazan’ity tale jeneraly ity izany tao amin’ny Carlton nandritry ny nifampiresahany andatabatra boribory momba ny asa ny talata faha 24 may 2022 teo. Voalaza moa fa any amin’ny CNAPS ( caisse nationale de prévoyance sociale) na ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy). Fanampiana mandalo ihany izany no ataon’ny fanjakana mandritry ny 8 volana, dia ny volana may ka hatramin’ny desambra 2022 ihany. Ny taona 2023 dia miverina any amin’ny mpampiasa indray ny fandoavana ny 30 000 ar ity. Nomarihin’ity ramatoa Razakaboana ity tamin’izany fa natao hoan’ny fiahiana momba ny covid-19 ihany io. Nohizingizininy mafy fa tsy te-hahalala izay orinasa tsy manondrotra karama voalaza ny fanjakana io izy fa hosaziana avy hatrany izay manda izany na inona na inona antony, indrindra fa ireo sekoly tsy miankiana , izay kely karama mampijaly mpiasa.
Ny taona 2023 izany dia toa ny manondrotra karama fanindroany indray ny sehatra tsy miankina raha io fanazavana io. Ho henjana ny raharaha izany. Ny lehiben’ny orinasa tsy miankina nefa dia maro no nandray iny raharaha iny fa haharitra ho fomba fiasan’ny fanjakana haharitra io. Nahatsapa ho voafitakin’nyfanjakana ny sehatra tsy miakina amin’ity fanondrotana karama ity satria ao anatin’ny iray taona izany dia hisondrotra in-droa ny vola aloa rehefa averina indray ilay 30 000 ariary.
Ny avy ao amin’ny sekoly tsy miakina dia efa nanambara fa tsy ho afaka hampiakatra ny karama izany na dia ilay 20 000ar izay asaina aloany manomboka amin’ity volana may 2023 ity aza. Fampiadiana ny mpiasa sy ny mpampiasa ity fanampahan-kevitry ny fanjakana iny. Fanapotehina ny fanabeazana eto Madagasikara koa. Tsy maintsy hitarika korontana eo amin’ny tontolon’ny asa izany ary hampitombo ireo tsy an’asa ihany koa.
Mitombo andro aman’alina ny olana misy amin’ny fanjakana sy ny vahoaka. Raha tsy mitandrina ny fanjakana dia hiteraka fihetsiketseham-bahoaka izany.